गृहजिल्लामा विष्णु पौडेललाई प्रश्न–‘अर्थ मन्त्रालयसँग राजधानी साट्नुभएको हो ?’ – Makalukhabar.com
२०७७, १२ माघ सोमबार
बेहुला बन्दा यस्ता देखिए मुख्यमन्त्री राई [तस्वीरहरु]
मकालु खबर	 २०७७ माघ ११ १३:५३
ओलीलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्दै प्रचण्ड-नेपाल समूह
मकालु खबर	 २०७७ माघ ११ ०८:०३
फुटपाथमा सुतेका मजदुरमाथि ट्रक कुद्दा १५ जनाको मृत्यु
मकालु खबर	 २०७७ माघ ६ ०९:४३
पी एम कप क्रिकेटकाे सेमिफाइनल समिकरण पूरा
सामसुङ डिजिटल प्लाजा अब गाईघाटमा
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले वन डे थ्रिडी आर्ट रेष्टुरेन्टमा छुट पाउने
ग्लोबल आइएमई र भण्डारा दूग्ध सहकारी बीच समझदारी
नेपाली राष्ट्रिय गान गाउँदै हिउँदमा ‘केटू’को चुचुरोसम्म [भिडिओसहित]
प्रदर्शनमा भेटिएका ७ वर्षीय सुप्रिम भन्छन् : प्रधानमन्त्रीले बेठीक गरे [भिडिओसहित]
समतादेखि आइग्लोनसम्मको यात्रा !
‘राष्ट्रिय झण्डा चिनाउने अभिभारा युवा पुस्तालाई छ’ [भिडिओसहित]
गृहजिल्लामा विष्णु पौडेललाई प्रश्न–‘अर्थ मन्त्रालयसँग राजधानी साट्नुभएको हो ?’
'के भने पौडेलले ?'
मकालु खबर	 २०७७ मंसिर १० ११:३१ मा प्रकाशित 120
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो पटक नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल गृहजिल्ला रुपन्देही पुगेका छन् ।
मंगलबार बुटवल पुगेका पौडेलले पत्रकारहरुसँग साक्षात्कार गरेका थिए । भेटमा पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयसँग प्रदेश राजधानी साटेको हो भनी प्रश्न गरिएको थियो । तर, जवाफमा पौडेलले त्यस्तो नभएको जिकिर गरेका थिए । ‘पहिले त प्रदेशको केन्द्र प्रदेश सभाले तोक्ने हो । अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने हो । त्यसकारण प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने विषय र प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने विषय साट्ने भन्ने प्रश्नै भएन । दोस्रो, साट्नुपर्ने आवश्यकता किन छैन भने म पहिलो पटक अर्थमन्त्री भएको होइन । यसअगाडि पनि अर्थमन्त्री भएको हुँ । त्यसकारण अर्थमन्त्री हुनका निम्ति साट्नुपर्ने भन्ने प्रश्न हुनै सक्दैन ।’ उनले भनेका थिए ।
यस्तै उनले निर्वाचनका बेला केन्द्रका विषयमा जनप्रतिनिधिहरुको आ–आफ्नै मत भएको पनि बताए । उनले भने, ‘प्रदेशको केन्द्रका विषयमा राजनीतिक दलहरु, जनप्रतिनिधिहरुका बीचमा आआफ्ना मत थिए निर्वाचनका बेला, त्यो भन्दा अगाडि पनि र पछाडि पनि । तर एउटा प्रक्रियाबाट अधिकारप्राप्त निकायले एउटा निर्णय गरेको छ । निर्णयमा पुग्नु अगाडि पनि हाम्रा मतहरु थिए । तर एउटा प्रक्रियाबाट निर्णय भइसकेकाले फेरि त्यतातिर फर्किएर लामो समय व्यतित गर्नुभन्दा जसरी प्रदेश सभाले रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीलाई आर्थिक, सांस्कृतिक र पर्यटनको केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने तय गरेको छ । म भन्न चाहन्छु, यो ठाउँलाई कुनै पनि हिसाबबाट पूर्वाधार, आर्थिक समाजिक दृष्टिकोणले पछाडि पर्न दिइने छैन ।’
पौडेलले शुरुदेखि नै प्रदेश नं. ५ को स्थायी राजधानी बुटवल हुनुपर्ने भन्दै लबिङ्ग गर्दै आएका थिए । तर, प्रदेश सभाले दाङको भालुवाङलाई पारित गर्यो । बुटवलकै पक्षमा रहेका पौडेल त्यसको केही समयपछि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला उनीमाथि अर्थ मन्त्रालयसँग प्रदेश राजधानी साटेको आरोप थियो ।
मकालु खबर 3203 खबरहरु0टिप्पणीहरू
सुनको मूल्य घट्यो, आज कारोबार कतिमा ?
नाटक ‘बोक्सीको घर’ को कथामा चलचित्र बन्दै
निर्वाचन सर्न पनि सक्छ : गृहमन्त्री थापा
आयोगको निर्णय आफ्नो पक्षमा भएको नेकपाका दुवै पक्षको दाबी
प्रदेश २ का आठ जिल्लामा एकैसाथ कोरोना विरुद्धको खोप अभियान
प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले पदको गरिमालाई धुलिसात बनाए : कांग्रेस
शुलभ मिडिया प्रा. लि.
प्रकाशक : सी.आर बस्नेत